▷ PS6: Goorma ayaan filan karnaa PlayStation 6 maxaan rabnaa inaan aragno? - 【 Isbarbardhigga】 2022
PS6: Goorma ayaan filan karnaa PlayStation 6 maxaan rabnaa inaan aragno?
Waxay noqon kartaa bilowga PS5, laakiin waxaan mar hore ka fikiraynaa PS6 (aka loo yaqaan PlayStation 6).
Uma badna inaan aragno console-ka PlayStation oo kale oo cusub dhowr sano.Laakiin taasi macnaheedu maaha inaanan ku khiyaali karin waxa aan jeclaan lahayn inaan ku aragno PlayStation soo socda, ama aan saadaaliyo goorta ay u badan tahay inaan helno PS6 cusub. Ka dib oo dhan, Waxaan ognahay in Sony ay horay u sii fikirtay, iyadoo soo bandhigtay magacyada PS6, PS7, PS8, PS9 iyo PS10.
Marka waxaan isku soo koobnay wax walba oo aan dooneyno inaan ku aragno PS6 iyo markaan qorsheyneyno inaan gacmaheena la galno ciyaarta soo socota ee PlayStation.
1 Taariikhda sii deynta PS6 - goorma ayaan filaynaa inay bilaabato?
2 PS6: Waxa aan rabno inaan aragno
2.1 Konsol ka yar
2.2 Kaydinta gudaha ee la ballaadhin karo badankood
2.3 Taageerada maqalka ee Bluetooth-ka ee ku dhex dhisan si aynaan ugu baahnayn dongle taleefoonnada gacanta ee rasmiga ah
2.4 Lacag la'aan wireless ah oo loogu talagalay kantaroolayaasha / sameecadaha - si fudud ayaa loo dhigi karaa dusha sare marka korontada la baxo
2.5 Ku xirnaanta wirelesska (iyo daahitaan la'aan) TV-ga
2.6 Hagaaji adeegsadaha isticmaalaha
Taariikhda sii deynta PS6 - goorma ayaan filaynaa inay bilaabato?
(Sumcada sawirka: Sony)
Malaha, PS6 wali waxay ahaan doontaa meel fog. PS5-ka kaliya ayaa la bilaabay Noofambar 2020, marka uma badna in Sony ay qorsheyneyso inay sii deyso PlayStation cusub dhowr sano.
Qalabka kombiyuutarka ee PlayStation wuxuu caadi ahaan bilaabaa lix ama toddobo sano oo kala fog, iyadoo PS4 uu imaanayo 2013 iyo PS5 ee 2020.
Wareysi uu siiyay Game Informer, Ku xigeenka madaxa fulinta ee Sony ee injineernimada qalabka, Masayasu Ito, ayaa xaqiijiyay in wareegga nolosha ee PS5 la filayo inay ahaato qiyaastii lix ama todoba sano., taas oo macnaheedu yahay ma arki doono PS6 ka hor 2026.
"Xaqiiqdii, waagii hore, meertada barnaamij cusub waxay ahayd toddobo illaa toban sano, laakiin marka la eego horumarka degdegga ah iyo is-beddelka teknolojiyadda, runti waa wareeg lix illaa toddobo sano ah," ayuu yiri Masayasu.
"Marka si buuxda uma qabsan karno horumarka degdega ah ee tignoolajiyada, markaa waxaan u maleyneynaa marka la eego madal loogu talagalay PS5, waa wareeg ah laga yaabee lix ilaa toddobo sano. Laakin adiga oo tan ka dhigaya meerto nololeed, waa inaan awood u yeelano inaan bedelno qalabka laftiisa oo aan isku dayno inaan la qabsano horumarka tignoolajiyada.
"Taasi waxay ahayd fikirka ka dambeeya, kiiska tijaabada ah ee fikirkaas wuxuu ahaa PS4 Pro, oo la sii daayay bartamihii wareegga bilaabista PS4."
Waxay u muuqataa in Sony ay raacayso khariidad la mid ah sida PS4, taas oo macnaheedu yahay Waxaan u badan tahay inaan arki doono nooca PS5 Pro ama nooca PS5 Slim bartamaha meertada nolosha: agagaarka 2023 ama 2024.
PS6: Waxa aan rabno inaan aragno
Konsol ka yar
PS5 waa console aad u weyn. Dhab ahaantii, waa console-ka ugu weyn taariikhda casriga ah. Laakiin ka weyn had iyo jeer macnaheedu maaha si ka sii fiican, cabbirka PS5-na wuxuu ka dhigayaa mid aan suurtogal ahayn kuwa aan shelf lahayn inay ku hoydaan iyo, aynu daacad nahay, in yar oo naga mid ah ayaa sameeya. Iyadoo PS6 (iyo laga yaabee xitaa PS5 Slim Edition), halkan waxaan rajeyneynaa in Sony ay wax ka baran karto khaladaadkeeda., samaynta soo socota-console yar oo dheeraad ah, iyada oo weli u ogolaanaya socodka hawada habboon.
Kaydinta gudaha ee la ballaadhin karo badankood
Waxay suurtogal noqon doontaa in la balaadhiyo kaydinta gudaha ee PS5 iyada oo la qarxinayo qaybta dhinaca iyo rakibida SSD, marka Sony ay sii deyso cusboonaysiinta software si ay u dhaqaajiso, laakiin ma fududa. PS5 kaliya waxay aqbashaa NVMe SSD-yada ku habboon, kuwaas oo la kulma ama dhaafa shuruudaha darawalada jira, mana noqdaan kuwo raqiis ah. Noocyada noocaan ah ee SSD-yada guud ahaan aad bay qaali u yihiin, taas oo macnaheedu yahay ciyaartoygu waxay dooran karaan kaydinta dibadeed, laakiin nasiib darro, doorashooyinkan kaydinta dibadeed kama faa'iidaystaan ​​awoodda cayriin ee PS5. Iyadoo PS6, waxaan fileynaa in Sony ay fududeyso ballaarinta kaydinta gudaha, laga yaabee in la qaato hab la mid ah Xbox Series X kaarka kaydinta la ballaarin karo.
(Sumcada sawirka: Shutterstock)
Taageerada maqalka ee Bluetooth-ka ee ku dhex dhisan si aynaan ugu baahnayn dongle taleefoonnada gacanta ee rasmiga ah
Waa wax lala yaabo in sanadka 2020-ka uu soo baxayo konsole cusub oo kaaga baahan inaad ku xidhato hebelaha USB dongle si aad u isticmaasho madax-madaxeedkaaga wireless-ka. Sida, waa maxay heck waa Sony? Ka hadal weerar bilicsan oo indhahayaga ah iyo meesha kaydinta ee TV-ga hoostiisa. Waxa kaliya oo ay isku xidhaa istaagga gurracan ee PS6. Caramba.
Lacag la'aan wireless ah oo loogu talagalay kantaroolayaasha / sameecadaha - si fudud ayaa loo dhigi karaa dusha sare marka korontada la baxo
Hubaal, dallacaadda Sony ee kontaroolayaasha PS5 DualSense ayaa si fiican u shaqeeya oo koontaroolayaashu si fiican ayay uga soo horjeedaan biinanka dallacaadda, laakiin dooni mayno qalab kale oo TV-gayaga ah. Sony waa in ay ka saartaa caleen buuga warshadaha casriga ah iyo saar Charger wireless dushiisa PS6. Tani waxay kuu ogolaan doontaa inaad dhigto koontaroolaha dusha konsole-ka, marka aanad ciyaareynin, si aad lacag u dallaciso, iyo Xitaa waxaad ku fidin kartaa tignoolajiyada dallacaadda bilaa-waayirka ah taleefoonnada gacanta, meel fog fog ee warbaahinta, iyo qalab kasta oo kale.
Ku xirnaanta wirelesska (iyo daahitaan la'aan) TV-ga
Waxaa jira xadhig aad u badan oo ka dambeeya xarumahayaga warbaahinta, waxaana eedda leh PlayStation 5. Waxaan helnay koronto iyo HDMI, iyo sidoo kale xirmo go'an oo gebi ahaanba gooni ah oo loogu talagalay sariirta kontoroolka. Ku dar kamarada HD iyo fiilada dheeriga ah ee PSVR 2 marka aad bilowdo oo arrimuhu qas yihiin. Iyadoo PS6, waxaan rabnaa kaliya xadhig koronto iyo wax kasta oo kale inay noqdaan wireless, sida cad oo aan lahayn dib-u-dhac ama latency.
Hagaaji adeegsadaha isticmaalaha
UI-da la cusboonaysiiyay ee PS5 ayaa hubaal ah inay qayliso "gen-xiga", laakiin sidoo kale waxay leedahay cillado dhowr ah oo aan jeclaan lahayn inaan ku aragno in lagu hagaajiyay PS6. Dukaanka PlayStation way adagtahay in la dhex maro, gaar ahaan marka ay timaado helitaanka iibka, isku day inaad hesho saaxiibadaa iyo tuurista xaflad ma fududa sida ay tahay PS4 iyo in kor loo qaado xitaa isku day. "Badhanku wuxuu qaadanayaa in ka badan intii loo baahnaa. Iyadoo PS4 UI uu si xun ugu baahnaa cusbooneysiin, waxaan ogaanay inay aad u sahlan tahay in la isticmaalo. Iyadoo la adeegsanayo PS6, waxaan rajeyneynaa in Sony ay aasaasi doonto go'aan wadaag ah oo mustaqbalka ah iyo mid la heli karo labadaba.